WARBIXIN: Xogta Dhaawacyada Liverpool Kahor Kulanka Real Madrid & Fursada Henderson, Van Dijk, Gomez & Joel Matip | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWARBIXIN: Xogta Dhaawacyada Liverpool Kahor Kulanka Real Madrid & Fursada Henderson, Van Dijk, Gomez & Joel Matip
WARBIXIN: Xogta Dhaawacyada Liverpool Kahor Kulanka Real Madrid & Fursada Henderson, Van Dijk, Gomez & Joel Matip
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayay hubaal tahay inuu waayayo afar ciyaaryahan oo muhiim ah kulanka lugta hore ee ay Real Madrid kula kulmayaan wareega siddeed dhammaadka ee Champions League kulan ah ku celiska Final-kii 2018 ee tartankaas.
Klopp ayaa ahaa mid isbedelo ku samaynayay shaxdiisa xilli ciyaareedkan oo dhan kaddib dhaawacyo qasay qorshihii uu kusoo galay bilawgii iyadoo ay ciyaaryahano ay kamid yihiin Jordan Henderson iyo Fabinho ahaayeen kuwo boosas kale ka ciyaarayay dhawr bilood.
Hammiga kaliya ee xilli ciyaareedkan ee Reds ayaa u muuqda ku guuleysiga UEFA Champions League balse waxa xaqiiqo ah inaysan ahayn koox cajiib ah ah sida markii ay dhaawac la’aanta ahaayeen.
Yaa Ka Maqnaanaya Liverpool Kulamada Real Madrid?
Afarta xiddig ee la xaqiijiyay inay seegayaan ugu horreynta lugta hore ayaa ah Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip iyo Jordan Henderson, waa saddex daafac dhexe iyo waliba khad dhexe oo qudhiisu kaabis u ahaa doorkoodii daafaca dhexe marka ay maqnaayeen.
Iyadoo ay Matip iyo Gomez maqnaan doonaan inta xilli ciyaareedka ka dhiman, sidoo kale waxa jira hammi yar oo laga qabo in Van Dijk markale ciyaaro xilli ciyaareedkan iyadoo uu Klopp arrin mucjiso ah ku sifeeyay haddiiba uu daafaciisaasi soo laabto.
Henderson ayaa dhinaciisa la filayaa inuu soo noqdo badhtamaha bisha April taas oo ka dhigan inuu diyaar u noqon karo lugta labaad ee Anfield ka dhacaysa.
Yaa Daafaca Dhexe Uga Ciyaari Doona Kulankaas Liverpool?
Iyadoo uu Fabinho doorka khadka dhexe ee bur-buriyaha ku laabtay kulankii RB Leipzig isla markaana si fiican uga soo muuqday markale booskaas ayaa la filayaa inuu isla halkaas ka ciyaari doono ciyaarta Real Madrid.
Klopp ayay u badantahay inuu talo saaran doono Nat Phillips iyo Ozan Kabak, daafaca ree Turkey ayaa muujinaya sababta ay tahay in Reds ay heshiiskiisa amaahda ah rasmi uga dhigaan halka Phillips uu haysto fursadii ugu fiicnayd noloshiisa ee uu Klopp ku tusi lahaa waxa uu awoodo.